A kpachapuru anya gbanyuo akara ngwa mgba ama MH370 - Igbo News | News in Igbo Language
Mar 15, 2014 - 00:39 Updated: Jan 20, 2021 - 00:40
Onye isi ọchịchị mba Maleshịa, Najib Razak, ekwuole na e nwere ịhe mere mmiri jiri baa n'opi ụgbọgụrụ. Ha achọpụtago na akpachapụrụ anya gbanyụọ akara ngwa mgba ama di n'ụgbo-elu Boeing 777 ndị mba Maleshia ahụ a na-achọ achọ kemgbe otu izu ụka.
Najib Razak kwuru na, site n'ozi ha nwentere n'igwe nnyocha satalaịtị, agwa ụgbọ-elu ahụ kpara, mgbe o na-efu efu, na-egosi ịhe aka mmadụ mere.
Ụgbọ-elu MH370, bu mmadụ 239, si Kụala Lụmpọ na-aga Beijing gbagidere n'elu bụrụzie ịhe a na-achọ achọ.
Anya ịkpeazụ igwe nnyocha njem ụgbọ-elu hụrụ MH370 bụ mgbe MH370 na-efe na mpaghara oshumiri ndịda Chaịna. Ụwa niile ka na-achọ MH370 ruo taa.